Mufananidzo wepaneru wepamberi weiyo iPhone 7 ine misha yakasununguka | IPhone nhau
Mufananidzo weiyo iPhone 7 pamberi pepaneru: hombe nzeve; yakasiya nzvimbo
Isu tinoenderera mberi ne "kuvuza", nguva dzose mune makotesheni nekuti zvinonyanya kuitika kuti Apple iri kumashure kwavo vese. Inenge nguva yakafanana neiyo vhidhiyo yekutanga yeiyo inoshanda iPhone 7, chikamu cheiyo Apple inotevera smartphone yakaonekwawo: iyo pamberi pepaneru. Iyi inonzi pamberi pepaneru ye iPhone 7 Iyo yakafanana chaizvo neiyo iPhone 6 / 6s, asi kune akatiwandei misiyano inokwezva kutarisisa kwedu, tichitanga nenzvimbo yemasaenzi.
Ndakaverenga mamwe midhiya akaona kuti iyi pani ine ma sensors maviri, asi ivo vaive vakarasika kufunga kuti ichi chitsva. Mhando dzekare zvakare dzine ma sensors maviri pamusoro peiyo nzeve, asi imwe yacho haioneke kana ukasanyatsotarisisa. Ndicho chikonzero nei magirazi anodzivirira ane gomba munzvimbo iyoyo. Chii chakasiyana, sekutaura kwatamboita, ndiyo chinzvimbo cheiyi sensor: mune iyo pani yemufananidzo yeiyi positi iri kurudyi, nepo mune apfuura mamodheru yaive kuruboshwe.
Iyo iPhone 7 earpiece ichave yakakura
Chinhu chechipiri chinomira kunze ndeye saizi yefoni. Pa iPhone 7 ichave yakakura uye zvinondipa kunzwa kuti ichave yakafara uye yakakwirira. Ini pachangu, handina kumbobvira ndaita dambudziko kunzwa vandinosangana navo patinotaura parunhare, saka tinogona kungofungidzira nezve chikonzero chehukuru hwekuwedzera kweiyi gomba.
Iyo 9.7-inch iPad Pro yakauya nechiratidziri Tone True, sisitimu nyowani inoongorora nharaunda kuti itiratidze mhando yemavara inoenderana nemavara akatikomberedza, zvinoreva kuti tinofanirwa kumanikidza maziso edu zvishoma. Zvichida kuti shanduko mune imwe yeema sensors e iPhone ane chekuita neiyi Rechokwadi Tone skrini. Chandisingazive ndechekuti nei vakaita kuti buri re earphone riwedzere. Tichasiya kusahadzika kubva munaGunyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Mufananidzo weiyo iPhone 7 pamberi pepaneru: hombe nzeve; yakasiya nzvimbo
Ini ndinobvumirana nemapoinzi awataura asi iwo maratidziro echiedza pachiratidziro anokwezvawo pfungwa dzangu, pamwe ndini kana zvinoita sekunge zvakanyanyisa kumucheto
Mhoroi, silu4. Ndinoreurura kuti ndakazvionawo izvozvo. Yakabata pfungwa dzangu, asi ndakafungawo kuti inogona kunge iri pfungwa isiriyo. Ndiri kufara mumwe munhu akazviona ndisina kutaura chinhu. Saka zvatova zvakanyanya kunetsa kuita zvikanganiso uye zvinogona kunge izvo kuti iyo iPhone 7 yaive yakatonyanya kukombama kupfuura iyo 6 / 6s. Kana tikatarisa kuti Apple inoda kuenderana, kana tiri vechokwadi, iyo iPhone 7 ichave zvakare yakakombama kubva kumashure.
Iyo bhatani repamba-screen nzvimbo zvakare idiki, mutauri bezel inobviswa zvakare nezvinoonekwa mune zvinoonekwa ... uye mutauri akakura kudaro ... Hameno kana mutauri wekumashure achatsiviwa neuyu ... Apple inogara ichirerutsa zvese… Uye nekusava nemvura, imwe membrane shoma kuti isimbiswe. Iniwo ndinofungidzira kuoneka kwemberi kupenya pasi peiyo grille yeiyi. Shuwiro yakanakisa
Yakakomberedzwa skrini = yakaoma kudzivirira, nyore kuputsa
iOS 10 beta 4 inotibvumira kudzima mameseji nekukurumidza nekuda kweiyo 3D Kubata